Mogadishu Journal » Guardiola ayaa difaacaya Sergio Agüero kadib dhacdadii Sian Massey-Ellis
Weeraryahanka Manchester City Sergio Agüero ayaan la fileyn inuu la kulmi doono wax ciqaab ah ka dib markii lagu qabtay isagoo gacanta u taagaya caawiye garsoore Sian Massey-Ellis intii lagu guda jiray kulankii ay kooxdiisu 1-0 kaga badisay Arsenal sabtidii.
Agüero lama dhacsaneyn go’aanka Massey-Ellis ee ah in aan la siinin tuur tuur intii ay ciyaartu socotay isla markaana uu gacanta saaray garabkeeda si ay ugala hadasho go’aanka, intaa ka dib sarkaalka ayaa si dhaqso leh ugu dhaqaaqay inuu gacantiisa iska riixo.
Waa dhacdo soo jiidatay dhaleeceyn la xiriirta dhaqan anshax xumo ah oo lagula kaco sarkaal, halka inbadan ay si deg deg ah ugu tilmaameen fal jinsiyeed, laakiin sida laga soo xigtay Jamie Jackson, Agüero ma la kulmi doono wax ciqaab ah.
Tababaraha City Pep Guardiola ayaa difaacay weeraryahankiisa, isagoo ku adkeystay inaysan jirin wax ficilkiisa ah, dadaalada dhaliishana waa inay diirada saaraan arimo kale.
“Rag kaalaya. Sergio waa shaqsigii ugu fiicnaa ee aan abid noloshayda la kulmo, ayuu yiri (via Goal).
Garsoorihii hore ee Premier League Chris Foy ayaa qirtay (iyada oo loo marayo Daily Mail) in aysan aheyn wax aan caadi aheyn in ciyaartoydu ay la soo xiriiraan saraakiisha, laakiin ciqaabta waxaa la tixgelin doonaa oo kaliya haddii ciyaaryahan loo arko inuu dagaal badan yahay
Ereyada muhiimka ah waa ‘gardarro’ iyo ‘iska hor imaad’, “Foy ayaa yiri.” Sharciyada ayaa sheegaya in aysan aheyn wax aan caadi aheyn in ciyaartoydu ay la soo xiriiraan saraakiisha. Ilaa iyo inta tan si asluub ​​leh loo sameynayo oo aan loo qaadin qaab dagaal ama iska hor imaad ah ma jiraan wax shuruud ah oo looga baahan yahay garsooraha inuu tallaabo qaado.
Waxa ay aheyd Raheem Sterling kaasoo qabtay goolka kaliya ee City, isagoo dabamariyay Bernd Leno bartamihii qeybta hore si uu u hubiyo in City ay qaadatay seddexda dhibcood. Kooxda Guardiola ayaa haatan fadhisa kaalinta 9aad ee kala sarreynta Premier League, iyadoo lix dhibcood ka hooseysa kooxda hogaanka heysa ee Everton.